ထိုင်းစတိုင် ၀က်သားကင် ထမင်းကြော် | Wutyee Food House
« ပြည်ကြီးငါးကြော် ရွရွလေး
ဗီယမ်နမ် ကော်ပြန့်လိပ် »
January 19, 2011 by chowutyee ထိုင်းစတိုင် ၀က်သားကင် ထမင်းကြော်
၄။ ချက်ပြီသား ထမင်း – နို့ဆီဗူး ၁လုံးစာ
၅။ ကြက်ဥ – ၂လုံး (ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီ ခလောက်ထားပါ)
၆။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပေးပါ)
ရ။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
၈။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း – ၁ဇွန်းခွဲ
၉။ ပဲငံပြာရည်(အကြည်) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁၀။ ပဲငံပြာရည် (အချို) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁၁။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ထည့်ပြီ ကြက်သွန်ဖြူများကို ဆီသပ်ပေးပါ
၂။ ပြီလျှင် မုန်လာဥနီ၊ ဘိုစားပဲများ ထည့်ပြီ ရောမွှေလိုက်ပါ။ ရေ(လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး ၁လုံးစာ) ထည့်ပေးပါ)
၃။ နောက်မှ ၀က်အူချောင်း (ကြော်ပြီသား)၊ ၀က်သားကင်တုံးလေးများကို ထည့်ပေးပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ပဲငံပြာရည်(အကြည်)၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အချို၊ သကြား အားလုံးကို အရသာအပေါ့အငံ့အတွက် ထည့်ပေးပါ။
၅။ နောက်ဆုံးမှ ချက်ပြီသား ထမင်းများကို လက်ဖြင့် အသာလေး ဖွပေးပြီ ထည့်ရောမွှေလိုက်ပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ထမင်းများကို အတုံးအခဲလိုက် မထည့်ပါနှင့်)
၆။ ပြီါ်နောက် အပေါ်မှ ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်မြိတ်လေးများကို ဖြူးပေးလိုက်ပါ။
ရ။ ကြက်ဥကို ဒယ်သပ်သပ်ဖြင့် အပါးကြော်ပြီ ၀က်သားကင်ထမင်းကြော်နှင့် တွဲဖက်ကာ ပူပူနွေးနွေး စားသုံးနိုင်ပါပြီ…..
on January 19, 2011 at 9:54 am | Reply Hmone gyi
very nice …so clever my twin….wanna eat
on February 5, 2011 at 9:47 am | Reply chowutyee
It is really delicious! Try it
on January 19, 2011 at 1:11 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဒီလက်ရာ မစားရတာ နာလိုက်တာနော်…
မနေ့က အိမ်မှာ စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်စားတယ်.း)
on January 20, 2011 at 2:34 am | Reply chowutyee
မချော နောက်တစ်ခါ စားရဖို့ အခွင့်အေ၇းကြုံအုန်းမှာပါ…. စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်လေး စားလို့ ကောင်းမှာ သေချာတယ်..😛
on March 22, 2011 at 6:50 am | Reply ko nyein
I like it so much. so tasty.
on August 5, 2011 at 3:26 pm | Reply ရည်မွန်
အမ ထမင်းထည့်ပြီးတော့ အဲ့လို စိုစိုလေးနေအောင် ရေထည့်သေးလား ညီမကြော်တဲ့ထမင်းကြော်က ခြောက်ခြောက်ကြီးဖြစ်နေလို့
ရေက ဟင်းရွက်တွေ နူးအောင် ထည့်တယ်။ ရေထပ်ထည့်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ ထမင်းနဲ့ ရောနယ်ပြီ မီးပိတ်လိုက်လျှင် ခြောက်ခြောက်ကြီး မဖြစ်သွားဘူး မရည်မွန်…
on November 30, 2011 at 2:45 am | Reply Poe Poe
အမစောနကထိုင်းအစားအစာမတွေ့မိလို့ ထိုင်းအစားအစာတင်ဖို့ကောမန့်ရေးလိုက်မိ တယ် စော်ရီးနော် အမ:P
on February 8, 2012 at 12:40 pm | Reply fkthet
ဒီလိုလှတပတလေးနဲ့ စားကောင်းမဲ့ဟာလေး စိတ်ဝင်စားတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ဘို့ထက် ဆွမ်းဟင်းပြင်ဆင်ခြင်တာလေ။ အသစ်လေးတွေတင်ပေးဦးနော်
ကျေးဇူး ညီမလေး ရေဆင်းကိုသတိမရဘူးလား။ ဒီနေ့ သံပုယိုသီးပေါင်းတွေကို သနတ်လုပ်စားမလို့ဝယ်ထားတယ်။ အချဉ်ထုတ်ကို အလွယ်လုပ်တာပေါ့
on February 8, 2012 at 2:13 pm | Reply chowutyee
အမြဲလာအားပေးလို့ သတိလည်းရတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်နော်..🙂
on October 8, 2013 at 9:46 am | Reply john